» “याेगेश भट्टराईले, रामकुमारी, झाँक्रीलाई संसदमै” कोल्याप्स हानेपछि…” “याेगेश भट्टराईले, रामकुमारी, झाँक्रीलाई संसदमै” कोल्याप्स हानेपछि…” – हाम्रो खबर
2021, October 17th, Sunday
“काठमाडौ। रामकुमारी झाँक्री फेरी भाइरल, श्रीमान् बने कारण: सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री फेरी भाइरल भएकी छन्। संधै चर्चा आइरहने उनी यो पटक श्रीमानका कारण भाइरल भएकी हुन्। नेपाल पृति सत्तात्मक समाजबाट निर्देशित छ। श्रीमानले श्रीमतिलाई दिएको निर्देशन अनुसार नेपालीहरुको घर चल्ने गरेको छ।”
“तर झाँक्रीका लागि भने ठिक उल्टो भएको छ। उनले आफ्ना श्रीमान पशुपति पुरीलाई सार्वजनिक रुपमा निर्देशन दिएपछि फेरि एकपटक चर्चामा आएकी हुन्। देउवा सरकारमा रामकुमारी झाँक्री नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट मन्त्री बनिन्। उनी मन्त्री बनेकै मन्त्रालयमा उनका पतिको काज सरुवा भएको छ।”
“उनी उपसचिवका रुपमा सोही मन्त्रालयमा कार्यरत छन्। उनले अहिले सहरी विकास मन्त्रालय हाँक्ने जिम्मेवारी पाएकी छन्। सहरी मन्त्रालयमा उनको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने काममा छन् पति पशुपति पुरी।”
“मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्ना साथ उनले कुर्सीमा बस्दै कर्मचारीलाई निर्देशन दिइन्। मन्त्रीका लागि गर्नुपर्ने ब्रिफिङ दसैं अघि नै गर्नुहोला। समय कम छ गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। उनलाई व्रिफिङ गर्नेमा पर्छन एक जना उनकै पति पशुपति।”
“वि.स. २०३४ सालमा गुल्मीको मयाल पोखरी गाविसमा जन्मिएकी झाँक्रीको राजनीतिक यात्राहरु उकाली ओराली छन् । ०६५ सालमा पोखरा महाधिवेसनबाट तत्कालीन नेकपा एमालेको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुको अध्यक्षमा चुनिएकी उनी कक्षा ७ मा अध्ययनरत रहँदै विद्यार्थी राजनीतिमा होमिएकी थिइन्।”
“कलिलै उमेरमा विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेकी उनी ०६५ सालमा अनेरास्ववियुको अध्यक्ष भएर राजनीतिक यात्रालाई चुलीमा पुर्याइन्। अनेरास्ववियुको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि उनी राजतन्त्रविरुद्ध सडकमा उत्रिइन्। २०६१ सालमा राजाले सैनिक परिचालन गरेर ‘कु’ सत्ता हातमा लिँदा झाँक्री राजतन्त्रविरुद्ध ज्यान दिन सडकमा उत्रेर विरोध गरिन्।”
“तर, राजनीतिक जीवनमा होमिएका झाँक्रीलाई अघि बढ्न उनका श्रीमान् पशुपति पुरीको उत्तिकै साथ छ। उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दा श्रीमान पुरीकै रोहबरमा रिहा गरिएको थियो। पुरी अहिले नेपाल सरकारको उपसचिव पदमा कार्यरत छन्। क्याफेमा भेट भएर चिनजान भएका झाँक्री र पुरीको स म्ब न्ध विवाहमा परिणत भयो।”
“झाँक्री मगर समुदायका हुन् भने पुरी आर्य समाजका ।तैपनि विचार र सिद्धान्त मिलेपछि पशुपति र रामकुमारीको चिनापर्ची भएको ५ वर्षपछि अर्थात् २०६६ माघ २९ गते विवाह भयो। पुरी अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको उपसचिवको रुपमा कार्यरत छन् । उनी धनकुटावासी हुन् भने झाँक्री गुल्मीकि हुन्।”
“याेगेश भट्टराईले रामकुमारी झाँक्रीलाई संसदमै कोल्याप्स हानेपछि: योगेश भट्टराई, गणेशकुमार पहाडी, रामकुमारी झाँक्री एमाले विभाजनपूर्व माधवकुमार नेपालको समूहमा थिए । एमाले विवाद उत्कर्षमा पुग्नु केही पहिला गणेशकुमार पहाडी बालुवाटार प्रवेश गरे । उनलाई ओलीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनाए । एमाले विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा योगेश भट्टराई बालकोट पुगे र एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीलाई आफ्नो साथ रहेको बताए ।”
“यता रामकुमारी झाँक्री भने माधवकुमार नेपालको हात समातेर निर्वाचन आयोग पुगिन् र नेकपा (एस) दर्ता गराइन् । त्यसै पार्टीवि,रु,द्ध पछिल्लो समय एमाले आयोगदेखि अदालत हुादै सभामुख सापकोटाविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म आक्रोश पोखिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकपछि योगेश र गणेश कुराकानी गरिरहेको ठाउँमा रामकुमारी पुगिन् । जहाँ उनीहरूले तस्बिर खिचाए र पत्रकारहरूसँग कुराकानी गरे ।”
“प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफूहरूलाई अनधिकृत भन्दै खगराज अधिकारीलगायतले लगाएको नाराले हाँसोसँगै रिस पनि उठेको रामकुमारीले बताइन् । योगेशले ठट्यौली गर्दै थपे, ‘कोल्याप्स गरिदिउँ लाग्यो कि क्या हो ?’ त्यसमा रामकुमारी सही थपिन, ‘हो कोल्याप्स नै गरिदिउँ जस्तो लाग्यो ।”
“त्यसपछि पत्रकारहरूले प्रश्न गर्‍यौं– न त रामकुमारीहरूलाई पदमुक्त गर्न भनेर नारा लगाउनुभयो न ढ्यापढ्याप गर्नुभयो किन ? योगेशले इशारा गर्दै जवाफ दिए, ‘मनबाट आउनुपर्‍यो त्यसपछि दिमागमा सन्देश जानुपर्‍यो र हातसम्म सन्देश पुग्नुपर्‍यो । अहिले त्यस्तो मनमा नै लागेको छैन ।,
’यसै गरि मन्त्रि रामकुमारी झाँक्रीले संसदका ‘हत्यारा’हरूले आफूहरुलाई गैरसांसद भन्नुमा कुनै आश्चर्य नभएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्।बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा उनले एमालेको चरित्र र औकात अनुसारको व्यवहार संसद्‌मा देखाएको आरोप लगाइन्।,
‘यस्ता स्तरहीन चरित्रका विषयमा प्रतिक्रिया दिन मन छैन’, उनले भनिन् ‘उहाँहरुको औकात अनुसार काम गर्नु भएको छ।’ बहुमतको सरकार ढा,लेर बालुवाटारबाट बालकोट पुगेर केपी शर्मा ओलीले खाँबो चिथोरिरहेको झाँक्रीको टिप्पणी छ। उनले भनिन्,‘खड्कप्रसाद ओलीको चाहनाले त यत्तिको उभिनु पनि दिनु हुने थिएन। उहाँको चाहनाले मात्रै नहुँदो रहेछ।’
“विधिसंगत तरिकाले सभामुखले सदन चलाउने उनले बताइन्।‘उहाँहरुले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको चरित्र गैरराजनीतिक चरित्र हो’, झाँक्रीले थपिन् ‘खड्गप्रसाद ओलीलाई लागेको भए हामीलाई धर्तिमा बाँच्न नदिने थियो होला नि ! त्यो सम्भव छ र ?’ सरकारमा कहिले जानेरु भनी सोधिएको प्रश्नमा उनले आजदेखि संसद्‌मा सत्तापक्षको रोमा बसेको र सरकारका जाने कुरा पार्टीले निर्णय लिने बताइन्।””
“किन बढेन नेपाल,को, जनसंख्या?”
“पाथिभरा माताले सबैको,मनोकामना पुरा गरुन, माघ १३ गते बिहिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
“नामभन्दा बद्नाम कमाएका, व्यक्ति हुन् प्रेम आले बाहिरियो मन्त्री आलेको कर्तुत, काण्ड सुन्दा सबै चकित !”
“ओलीलाई फेरि अर्को, धक्का दिदै, माधव नेपाल”
“देउवाले चुनावको, मिति तोकेमा, प्रचण्ड र माधव नेपाल गठबन्धन तोड्ने , बाहिरियो बास्तबिकता !;
“देश नरहने अवस्था,आइसक्योः लिङ्देन”
“एमालेले ‘क्लिन स्वीप’ रोक्दा, गठबन्धनभित्र अन्तर्घात
“मत बराबर भएपछि, प्रदेश १ मा गोपाल बस्नेत गोलाप्रथामा भाग्यमानी”
“मुलुकभर थप ८४५४ जनामा” कोरोना, पुष्टि, ५ संक्रमितको, मृत्यु”
“राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : सुदूरपश्चिममा, गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवारी,दिएका तीन जना नै विजयी”
“सामाजिक अभियन्ता, ज्ञानेन्द्र शाहीले, सार्वजनिक गरे आफ्नो सम्पत्ति”
“लुम्बिनीमा गठबन्धनका, उम्मेदवार, विजयी”
“विदेशमा रहेका”नेपालीको सङ्ख्या २१ लाख ६९ हजार, विदेशिने, महिलाको, सङ्ख्या बढ्यो”
“डा. बाबुराम भट्टराई,लाई कोरोना, संक्रमण”
“अर्थतन्त्र धराशायी भयो भन्नेहरू,लाई कामबाट जवाफ दिन्छौँ : अर्थमन्त्री शर्मा”
( 2022, January 27th, Thursday)
( 2022, January 26th, Wednesday)